विवाह सम्बन्ध मा मानिसहरूको मनोविज्ञान, वा किन मानिसहरू विवाह गर्न चाहँदैनन्?
केही जोडे पूरा र पनि धेरै वर्ष को लागि सँगै बस्ने, तर हामी धेरै महिलाहरु चाहनुहुन्छ रूपमा अन्त यी सम्बन्ध तोड्न भन्दा विवाह अन्त। किन मानिसहरू विवाह गर्न चाहँदैनन् तिनीहरू पत्नी सिद्ध छैन चयन किन उनि शोक र आनन्द धेरै साझेदारी कोसँग एक महिला र महिला? को मनोविज्ञान मानिसहरू यस लेखमा हामी पुरुषहरु चेतना सबै रहस्य प्रकट हुनेछ, र एक प्रेम कसरी विवाह गर्न अन्तिम मा पत्ता लगाउन व्याख्या गर्न।
मुख्य प्रश्न: विवाह र परिवार सुरु गर्न किन मानिसहरू 50 वर्षअघि तयार?
पहिलो, यौन सम्बन्ध मानिस मात्र विवाह पछि प्राप्त। र वास्तवमा एक कुरा रूपमा आफ्नो मानिसहरू एक महिलाको शरीर को आवश्यकता हो - यो वैवाहिक बन्धन को निष्कर्षमा लागि एक विशाल प्रोत्साहन छ।
दोस्रो, एक केटी जस्ता दीर्घकालीन एकान्त सहभागिता गाह्रो थियो। निश्चित, संचार को एक सानो बिट - फिलिम, फूल, विवाहपूर्वको र विन्डो अन्तर्गत serenades - यो निषेध गरिएको छ, तर विवाह अघि सँगै बस्ने वा रात सँगै बिताउँछन् आउन जवान, यो प्रश्न हुन सक्दैन।
तेस्रो, विवाह अघि, त्यो विजय को मुख्य वस्तु थियो, तर निरन्तर बनाउँछ जसले कुनै पनि महिला मानिस केही माग्दै सबै समय माग।
आज हामी के देख्नुहुन्छ? किन सम्बन्धमा मानिसहरूको मनोविज्ञान महिलाहरु संग नाटकीय परिवर्तन भएको छ? त्यसैले, आदेश मा:
नारी शरीर निःशुल्क पहुँच।
आज, बालिका ओछ्यानमा तुरुन्तै पहिलो मिति पछि, भने पहिलो मिनेट डेटिङ जानुहोस्। किन विवाह - सेक्स र त यो गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह, यो एक निजी कुरा हो, तर सम्झना, को सजिलै पहुँच महिलाहरु मा मानिसहरू विवाह छैन। खैर, एक instructive फिलिम "गर्ल्स" - एक वास्तविक विवाह अघि मानिसहरूको मनोविज्ञान।
धेरै भन्न हुनेछ, पटक अहिले अघि सेक्स बिना सम्बन्ध सिर्जना गर्न असम्भव छ, परिवर्तन विवाह। तर माथि को सार मान्छे मात्र देखेको छैन भनेर सम्बन्ध गठन हुनुपर्छ, कि तर पनि मुख्य लाभ एक स्थिर यौन सम्बन्ध हो, हामी थाह छ, वैवाहिक बन्धन लाभ उठाउन चाहन्थे, र मामला छैन, र। एक विवाह मा छ, कानुनी गुणस्तरीय, स्थिर हुनुपर्छ पुरुष सेक्स को प्रतिनिधित्व अनुसार, छ - कि के मानिसहरूको मनोविज्ञान।
किन मानिसहरू विवाह गर्न इन्कार दोस्रो कारण - केटी संग संचार।
त्यो संचार एक महिला चासो जगाउँछ। उहाँले मनपर्ने थप जानकारी पाउन र उनको चासोको विषय चाहन्छ। यस घनिष्ठ सम्बन्ध वा गुणात्मक संचार - कसैले ठ्याक्कै विवाह उसलाई धक्का के थाह छ। Conditionally 50/50 छलफल गर्न सकिन्छ।
आजको युवा एक शानदार समाधान संग आए - किन कहीं जाने र हरेक दिन पूरा गर्न? प्रत्येक अन्य जान्न रही - यसलाई सार्न र सँगै बाँच्न सजिलो हुनेछ। यहाँ एक मानिस छ र सोच्छ: किन विवाह, अनावश्यक फोहोर, जिम्मेवारी - र सबै त अद्भुत। एक महिलाको आशा र प्रतीक्षा - कि पुरुष र महिला को मनोविज्ञान बीच फरक छ। त्यसैले, तपाईं पूरा अघि, यो राम्रो एक हजार पटक सोच्न, तपाईं यो मानिस विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने छ।
तेस्रो कारण - केटी बाट मानिस गर्न निरन्तर माग र आलोचनाएँ।
जवान एक नागरिक विवाह बाँच्न थाल्दा, त्यसपछि महिला पतिको रूपमा मानिस बुझ्ने गर्न सुरु - यसैले त्यहाँ विभिन्न आलोचनाएँ, संघर्ष, आदि छन् तर मान्छे पतिको भूमिकालाई मा महसुस गर्दैन र आफ्नो पत्नी बसोबास कोसँग केटी विश्वास गरेनन्। तल लाइन: भ्कगडा - भागे।
यस लेखमा के निष्कर्षमा आएको सकिन्छ?
अक्सर, यो मान्छे आफ्नो चासो पूरा गर्ने बाहिर जान्छ र विवाह अघि चाहनुहुन्छ। अब विवाह छ के - उहाँले सामाजिक, सेक्स जीवन र आवश्यकताहरु sated। यो अचम्मको छैन - यो जीवनको एउटा axiom छ।
केही भन्न हुनेछ: "वास्तवमा, विवाह पछि नै हुनेछ - संचार, सेक्स, पारिवारिक जीवन।" - यो त्यहाँ तर्क, तर गलत देखिन्छ। दर्ता सम्बन्ध सधैं मान्छे जडान, यो थियो विवाह पछि त्यहाँ संयुक्त सम्पत्ति, छोराछोरी, साधारण मित्र itp छ
पति र पत्नी एकअर्काप्रति जिम्मेवार महसुस र परिवार छोराछोरी हुर्काउन छ भने - यो एक दोहरी जिम्मेवारी हो। यो मानिसहरूको मनोविज्ञान गाह्रो छैन, र पनि समझदार र तार्किक केही अवस्थामा बाहिर जान्छ। तपाईं विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने - पूर्ण मानिसलाई disclosed बन्द लेख्न छैन।
के दया छ र कसरी आफूलाई विकास गर्ने?
स्मृति मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त। सामान्य विशेषताहरु
बच्चाहरु र वयस्क लागि मनोवैज्ञानिक उपचार को एक विधि रूपमा Skazkoterapiya
मैसाचुसेट्स प्रयोग: तथ्य वा मिथ्या
कसरी उपयोगी cornmeal?
कारण र समाधान: मा निष्क्रिय कम्पन
तारकीय जीवनी इल्या Lagutenko - मुख्य "Mumiy ट्रोल"
केक सजावट: मास्टिक को फूल
लक्षण र विशेषताहरु: महिला मा रजोनिवृत्ति को लक्षण के के हुन्
खुट्टा मा एक नस मा रगत थक्का: लोक उपचार को उपचार